List Khabar – Page 20 – New List Khabar – Daily News Updates
पेट थिचेर सुत्ने बानी छ ? नगर्नुहोस् रातमा यी गल्ती
काठमाडौँ । सुन्दर देखिने चाहना सबैको हुन्छ। तर हामीले कहिले काही यस्ता गल्ती गरिरहेका हुन्छौँ, जुन जसले गर्दा अनुहारको सौन्दर्य र चमक हराइरहेको हुन्छ। सुन्दर बन्न धेरै उपाय अप्नाउने तर जीवन शैलीमा ध्यान नदिदा पनि तपाईले आफ्नो सौन्दर्य गुमाइराख्नु भएको हुनसक्छ। आज हामी राति सुत्दा गरिने केही गल्तीका बारेमा जानकारी …
आजकल नेपाली समाजमा थुप्रै कारणहरुले डिभोर्सको घटना दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । कतै तपाईले आफ्नो श्रीमतीलाई खुसि पर्न नसकेर तपाईको परिवारिक जीवनमा खटपट त परेको छैन ?सामाजिक संजालमा चितपरिचित लेखेक गणेश ज्ञवालीले तयार पारेका श्रीमतीलाई खुसी बनाउने २५ सुत्रहरू यी सुत्रहरु अपनाउनुभयो भने तपाइको परिवारमा कहिले पनि झगडा हुदैन । …
९३ केजी पुगेकी प्रियंका कार्कीले फिल्म खेल्न कै लागि घटाइन २४ केजी तौल
काठमाडौं । अभिनेत्री प्रियंका कार्की चलचित्रमा फेरि नायिकाका रूपमा फर्कने तयारीमा छिन् । उनी पछिल्लो समय आफ्नो तौल घटाउन निकै सक्रिय छिन् ।केही महिना अघि सुत्केरी भएपछि उनी मोटाएर ९३ केजी पुगेकी थिइन् । तर, दुई महिनाको निरन्तर अभ्यासबाट आफूले करिब २५ केजी तौल घटाएको उनले बताएकी छन् । ‘मैले …
नेकपा (एमाले) का सचिव तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले अमेरिकाको ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम’ (एसपिपी) मा नेपालले कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्न नहुने बताएका छन् । एसपीपी सम्झौताबारे भन्दै बाहिर आएको मस्यौदा नेपालको हितमा नरहेको रायमाझीको दाबी छ । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता रायमाझीलेभने–‘एसपीपीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको …
बहुचर्चित सञ्चारकर्मी चर्चित टेलिभिजन पत्रकार रवि लामिछाने आसन्न संसदीय चुनाव लड्ने भएका छन् । लामिछानेले काठमाडौंबाट चुनाव लड्न ग्यालेक्सी टीभी छाडेका हुन् । आगामी प्रतिनिधि सभा चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेका लामिछानेले टीभी छाडेका स्रोतले बताएको छ । बिहीवार खादा लगाएर उनी टेलिभिजनबाट बिदा भएका छन् । आमजनताको सरोकारका …
आरती नाम भएकी एउटी युवतीको बिहे भयो । बिहेपछि आरती आफ्नो पति अनि सासू–ससुराका साथमा पतिघरमा बस्न थालिन् । केही दिनमै उनलाई महसुस भयो उनकी सासूसँग उनको सम्बन्ध सहज हुनेवाला छैन । सासूका साथमा बसेर बाँकी जीवन बाँच्न उनलाई असह्य कष्टकर हुने देखियो । सासू पुरानो विचारकी,बुहारी आधुनिक सोचाइकी । …
2 weeks ago स्वास्थ्य 0
कहिलेकाहिँ विहान उठ्दा तपाईंको शरीरमा निलो दाग–धब्बा देखिन्छ ? यस्तो दाग दुख्छ पनि ? यदि तपाईंको शरीरमा पनि निलो दाग र धब्बा देखिन्छ भने सावधान भइहाल्नुहोस् । किनकि शरीरमा आउने कुनै पनि परिवर्तनले तपाईंको नराम्रो स्वास्थ्य अवस्थालाई संकेत गरिरहेको हुन्छ । नेपाली समाजमा एउटा अन्धविश्वास पनि छ, शरीरमा निलो दाग …
काठमाडौं । प्रेम सम्बन्धपछिको विवाहले डरलाग्दो रुप लिएको छ । काठमाडौँको जोरपाटीमा डेरा गरि बस्ने २५ वर्षकी शिला घलेले आफ्नै २४ वर्षीय श्रीमान जालमान स्याङ्तानको चक्कु प्रहार गरि हत्या गरेकी छिन् । गोकर्णेश्वर नगरपालिका–६ पुरानो शान्त भवन बस्दै आएका स्याङ्तानलाई सामान्य घरायसी विवादको क्रममा शिलाले तरकारी काट्ने चक्कुले छातीमा प्रहार …
काठमाडौं – चर्चित संचारकर्मी रबी लामिछाने संचारकर्मी छाडेर राजनीतिमा होमिने भएका छन् । उनले आउँदो संसदीय चुनावमा काठमाडौंबाटै कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिने तयारीसमेत गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा चुनावमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका उनले आफ्नो उम्मेदवारी स्वतन्त्र हुने अथवा कुनै पार्टीबाट हुने भन्नेबारे भने खुलाएका छैनन् । आफ्नो राजनीतिको …
केहि दिन अघि भोजपुरी फिल्म उद्योगकी अभिनेत्री त्रिशाकर मधुको एमएमएस भिडियो लिक भएको केही दिनमा नै अर्की अभिनेत्री प्रियंका पंडितको भिडियो लिक भएको छ । भिडियो लिक भएपछि आ-क्रोश पोख्दै एमएमएस लिक हुनुमा आफ्नो दुश्मनको हात रहेको बताएकी थिइन् । उनले एमएमएस आफैले बनाएको पनि स्वीकार गरेकी थिइन् । तर, …